कांग्रेसका नेता तथा कर्मवीर उद्यमी कार्की नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य
रिया नेपाल आइतबार, मंसिर १४, २०७७
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशसिंह कार्की। राजनीतिसँगै नेपालीको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि कार्कीको छुट्टै पहिचान स्थापित छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा चन्द्रप्रसाद ढकालको समूहलाई समर्थन गरेर चुनावी अभियानमा होमिएका कार्की वस्तुगत कार्यसमिति सदस्यका विजयी भएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा साधारणसभा तथा अधिवेशन सम्पन्न भयो।
महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि कार्कीले आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डासहित आफू काम जुट्ने बताएका छन्। २०२० सालमा सोलुखुम्बु जिल्लाको साविकको सल्यान गाविसमा जन्मिएका हुन् कार्की। त्यसपछि प्रारम्भिक शिक्षा र हाइस्कुल शिक्षा सदरमुकाममा एडमण्ड हिलारीले स्थापना गरेको स्कूलबाट पूरा गरे।
त्यसपछि १८ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएका हुन् कांग्रेस नेता कार्की। क्याम्पस पढ्ने सिलसिलामा उनले पब्लिक क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (आइकम) पूरा गरे।
एसएसलसी २०३६ सालमा पास गरेका कार्की त्यसपछिका ३ वर्ष सोलुखुम्बुमै बसे। २०३९ सालमा काठमाडौं आए। आइकम पूरा गरे। त्यसपछि व्यवसायतिर लागे। झण्डै ३५ वर्षदेखि व्यवसायमा सक्रिय कार्कीले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघमा यसअघि पनि काम गरिसकेका छन्।
यसअघि निर्वाचन जितेर महासंघको कार्यकारी सदस्य भएका कार्कीले उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा सुधारका धेरै काम गरेका छन्। व्यापार एक्सपोर्ट प्रवद्र्धन केन्द्रको सभापति पनि थिए उनी। विशेषगरी लजिस्टिक कस्ट घटाउने विषयमा भूमिका खेल्दै एक्सपोर्ट र इम्पोर्टका सन्दर्भमा पनि उनले काम गरे। आयात निर्यात क्षेत्रको एशोसिएसन चाहिने भएकाले विगत १५ वर्षदेखि लगातार महासंघमा सहभागी हुँदै आएको उनी बताउँछन्।
‘कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपाल देशका सबै व्यवसायी उद्योगीहरूका लागि काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै हामी महासंघको चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका हौं, हाम्रो टिम विजयी भयो,’ कार्कीले भने। महासंघको केन्द्रीय सदस्य कार्कीसँग नेपाली पब्लिकले गरेको संवादः
निर्वाचनमा तपाईको टिम विजयी भयो, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सबै उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था हो। निजी क्षेत्रको छाता संगठनको अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकै व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले पनि यो अधिवेशनलाई महत्त्वका साथ लिइएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी किशोर प्रधानलाई पनि महासंघमा साथै लिएर अघि बढ्छु भनिसक्नु भएको छ। हाम्रा एजेण्डाहरूलाई मतदाता साथीहरूले मन पराउनु भयो। अब उहाँहरूको विश्वास र भरोसालाई कायम राखेर हामी अघि बढ्छौं।
व्यावसायिक उत्थानका सन्दर्भमा के–के गर्नुहुन्छ?
–महासंघले संस्थालाई सही तरिकाले चलाउन सक्ने नेतृत्व पाएको छ। कोरोना प्रकोपले हाम्रो अर्थतन्त्र नै धराशायी अवस्थामा छ। यसलाई पनि माथि लैजाने तबरबाट जानसक्ने गरी कार्यक्रम बनाउँछौं। सरकारलाई पनि साथमा लिएर जाने, समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी काम अघि बढाउँछौं। निजी क्षेत्रले सुविधा लिन सक्ने र आर्थिक क्षतिको निराकरणको काममा हामी लाग्छौं।
सरकारसँग समन्वय कसरी गर्नु हुन्छ?
–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चलायमान गराइराख्न र गति दिन पनि चन्द्रप्रसाद ढकालको टिमको जीत आवश्यक थियो। र, त्यो भयो पनि। अब सरकारसँग अपेक्षाकृत समन्वय गरेर व्यावसायिकको हितमा हामी लाग्छौं। उद्योगी व्यवसायीको हरेक सवालमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नै हामीले आवश्यक रणनीति बनाएका हौं । त्यो कार्यान्वयन गर्छौं।
महासंघलाई अघि बढाउने, व्यवसायीको हित हुने एजेण्डा चाहिँ के–के छन्?
–सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई साथ दिनुपर्छ। व्यवसाय गर्न देशमा शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ। लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ। यसका लागि सबैलाई समेटेर अघि बढाउन र सरकारसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने गरी हाम्रा कार्यक्रम बनेका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौं। सबैलाई मिलाएर लानसक्ने क्षमता नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छ। निजी क्षेत्र एकताबद्ध बनाएर लैजाने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुछ। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा परेको कोरोना प्रकोपको असरलाई न्यूनिकरण गर्न र दीर्घकालीन रणनीति बनाएका छौं। यसको सशक्त कार्यान्वयन चाँडै गर्ने छौं।
#नेपाली_कांग्रेस #चन्द्रप्रसाद_ढकाल #नेपाल_उद्योग_वाणिज्य_संघ #प्रकाशसिंह_कार्की
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १४, २०७७ २०:५६